IXiaomi Mi Band 4: Yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku | I-Androidsis
IXiaomi Mi Band 4: Oko sikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku
IXiaomi Mi Band 4 sisizukulwana sesine sesongo sophawu lwesiTshayina. Ukuphehlelelwa kwayo kucwangciselwe lo nyaka, njengoko sele beqinisekisile kwinkampani uqobo ukuza kuthi ga ngoku. Kule veki, siqale ukwazi iinkcukacha malunga nale bracelet yohlobo lwesiTshayina, ngawo onke amaxesha ngokuvuza okungafaniyo. Ngalo lonke ixesha sifumana idatha malunga nayo, ke kulungile ukuba siqokelele yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukulandela impumelelo yesizukulwana esidlulileyo, yintoni enayo ithengiswe kakuhle kumazwe aphesheya okanye ngaphakathi Iimarike ezinjengeIndiyaAkumangalisi ukuba inkampani sele isebenza kule Xiaomi Mi Band 4. Isizukulwana esitsha esithembisa ukufika kunye neenguqu ezahlukeneyo, njengoko sele zivuliwe ukuza kuthi ga ngoku.
3 Umhla wokukhutshwa
Utshintsho lokuqala esilufumana kwisongo kuyilo. Ngesi sihlandlo, uphawu lwaseTshayina lwazisa isikrini esikhulu kulo, kulo mzekelo luya kuba zii-intshi ezingama-0,95 ngesisombululo sama-pixels angama-240 x 120. Ukongeza, iya kuba siscreen sokuchukumisa kwaye iya kufikelela kwabanye ngombala, njengoko kubonisiwe kukuvuza okuninzi. Inkampani iya kusebenzisa iphaneli ye-AMOLED kule bracelet.
Kunyaka ophelileyo sele besishiyile isikrini esikhulu, ke kubonakala ngathi khange babanele. Nangona ubuchule, kuya kwenza kube lula ukusebenzisa le Xiaomi Mi Band 4 kuzo zonke iintlobo zeemeko. Yinkcukacha ebaluleke kakhulu kule nkalo yohlobo lweTshayina.
IXiaomi Mi Band 4 iya kuba neBluetooth 5.0 kunye ne-NFC chip
Malunga noku sele kukho amarhe ngokwaneleyo okwangoku. Kutyhilwe ukuba isizukulwana esitsha sesongo siza kufika ngeBluetooth 5.0. Yintoni egqithisile, ngethemba lokuba kuyakubakho inguqulelo yayo kunye ne-NFC, njengoko kwenzekile kunyaka ophelileyo, nangona le nguqulo ingakhange ikhutshwe eSpain. Umbuzo ngowokuba ingaba le Xiaomi Mi Band 4 kunye ne-NFC iza kumiliselwa eSpain.
Inzwa yokubetha kwentliziyo yenza ukubonakala kwakhona kuyo, ngothotho lwezinto eziphuculweyo, ezijolise ekubeni zichane ngakumbi kwesi sizukulwana. Asazi okwangoku ukuba zeziphi izinto eziphuculweyo eziye zaziswa kuyo, ukuphucula ukusebenza ngokuchanekileyo. Kodwa yenye yeenkwenkwezi ezisebenza kwisongo.
Ukongeza, kuye kwakho ukwazi ukuba le Xiaomi Mi Band 4 intsha izakuxhasa imiyalelo yelizwi. Ngokufanelekileyo, inguqulelo yaseTshayina yesongo iya kusebenzisa umncedisi webhrendi, ebizwa Xiao AI. Nangona kuhlobo lwamazwe aphesheya kunokwenzeka ukuba uMncedisi kaGoogle asetyenziswe, ukuze ihambelane neelwimi ezahlukeneyo ngexesha elinye. Akukho siqinisekiso ngoku sokusetyenziswa kwabo nabaphi na abancedisi kwisongo.
Asinazo iinkcukacha malunga nebhetri yesongo okwangoku. Nangona amarhe amatsha abonisa ukuba iza kufika nomthwalo welinye ilizwe. Luhlobo lomthwalo esivumela ukuba singasusi isixhobo kumtya ukuze sikwazi ukusihlawulisa. Kule meko, ukutshajiswa kwayo kuya kwenziwa ngeadaptha. Le yinto engekaqinisekiswa ukuza kuthi ga ngoku.
Enye yamathandabuzo amakhulu ukuza kuthi ga ngoku. UXiaomi uthe kuphela ukuza kuthi ga ngoku ukuba isongo liza kuphehlelelwa kwi-2019, nangona bengakhange banike imihla unyaka wonke. Imodeli yonyaka ophelileyo yafika kwintengiso ngoJuni, ke kusenokwenzeka ukuba kule nyanga siza kuba neendaba. Kuba kuqhelekile ukuba uphawu lwazisa iimveliso zalo ngemihla efanayo.
Kodwa kuya kufuneka silinde iintsuku ezimbalwa kude kube masazi ngakumbi malunga nokufika kwale Xiaomi Mi Band 4 kwintengiso, Okungathandabuzekiyo ukuba yonke into ibe yimpumelelo yohlobo lwesiTshayina. Ukubona ukuthengiswa okuhle kwesizukulwana sesithathu, ngekhe kumangalise ukuba kulo nyaka bayonyuka ngale bracelet intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi Band 4: Oko sikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku
Amagorha eWaterdeep eDungeon naseDragons kodwa ahlala kude
Ukuthengiswa kweSamsung eSpain kuyanda